Welding Robot, Zenzekelayo Ukutshiza Robot, Palletizing Robot - Jiesheng
Umzi mveliso weRobhothi
Iirobhothi zethu ziyilelwe ukuba zifezekise uguquko oluzenzekelayo kwimizi-mveliso kwaye sizimisele ukufaka isandla ekusombululeni imiceli mngeni kubathengi.
I-Yaskawa MOTOMAN-GP25 yokuphatha iinjongo zerobhothi ngokubanzi, enemisebenzi etyebileyo kunye nezinto eziphambili, inokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abaninzi, ezinje ngokubamba, ukushumeka, ukudibanisa, ukugaya kunye nokulungisa iindawo ezininzi.
Imoto yokutshiza imoto ye-MPX1150 ilungele ukutshiza imisebenzi encinci. Inokuthwala ubunzima obukhulu be-5Kg kunye nobude obuthe tyaba obungama-727mm. Ingasetyenziselwa ukuphatha nokutshiza. Kuxhotyiswe ngekhabhathi yolawulo lwe-minixurized DX200 enikezelwe ukutshiza, exhotyiswe ngumgangatho osemgangathweni wokufundisa kunye nesibhengezo sokuqhushumba esinokufundisa kwiindawo ezinobungozi.
Umatshini omncinci osebenza nge-laser welding robot MOTOMAN-AR900, 6-axis nkqo uhlobo oludibeneyo lokudibanisa, ukuhlawulwa okuphezulu kwe-7Kg, ubuninzi be-elongation ephezulu ye-927mm, efanelekileyo kwi-YRC1000 yolawulo lwekhabhinethi, kusetyenziswa kubandakanya i-arc welding, i-laser processing, kunye nokuphathwa. Inokuzinza okuphezulu kwaye ilungele uninzi Olu hlobo lwendawo yokusebenza, engabizi mali, lukhetho lokuqala lweenkampani ezininzi IMOTOMAN Yaskawa robot.
Ukongeza kwiimveliso zokusebenza eziphezulu, sibonelela ngenkonzo yokuhlanganisa irobhothi ethembekileyo, ukusebenza ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo- nkqu nakwiimeko ezimbi kakhulu.
Umdibaniso weerobhothi mnikezi nkonzo
Yasekwa ngomhla we-23 kuFebruwari 2011, iShanghai Jiesheng Robot Co., Ltd.yishishini elibanzi lobuchwephesha eligxile kuphando nakuphuhliso, imveliso, kunye nentengiso yezixhobo kunye nezinto kumacandelo eerobhothi zeshishini, ukuwelda kunye nokusika, kunye nokubonelela Iinkonzo zobugcisa ezibanzi. Ezona mveliso ziphambili zenkampani: iirobhothi zaseYaskawa, iiseli zomsebenzi wokuwelda, isikhululo sokusebenza sewelding, igumbi lokusebenza kwewelding, izixhobo zokuwelda kunye nezinye izinto. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwi-arc welding, indawo ye-welding, i-gluing, ukusika, ukuphatha, ukuthambisa, ukupeyinta, uphando lwezenzululwazi kunye nokufundisa. Nika uyilo lwezixhobo ezizisebenzelayo, ufakelo kunye neenkonzo emva kokuthengiswa kwabavelisi bezinto ezizenzekelayo.
Itekhnoloji yaseTshayina yeyona ibalaseleyo emhlabeni kwaye umgaqo-nkqubo we-MAEDA "Wenziwe e-China" uthetha udidi oluphezulu, inkqubo ehambelanayo yophuhliso kunye nokwenziwa ngaphakathi e-China.
Izicelo zeMini Crane yethu zingenamda. Apha uya kubona igalari yemifanekiso kunye neevidiyo ukufumana inkuthazo yomsebenzi wakho olandelayo.
I-Yaskawa arc welding robot AR2010
I-YASKAWA ephethe ngobuchule i-robot MOTOMAN-GP35L
Ukuphathwa kweRobhothi eyi-Yaskawa Motoman Gp7
Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis,